Cyber Security Archives | Pyae Heinn Kyaw's Blog
UNICODE အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ .. ဒီနေ့မှာတော့ £500 တန် Network Security Course ကို Free ရအောင်ယူနည်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီ Course ရဲ့ နာမည်အပြည့်အစုံကတော့ Certified Network Security Specialist (CNSS) ဖြစ်ပြီး UK အခြေစိုက် International Cyber Security Institute (ICSI) က ပို့ချပေးတာဖြစ်ပါတယ် .. အခု COVID-19 ကြောင့် အိမ်မှာနေနေရတဲ့လူတွေအတွက် သူတို့ရဲ့ Course တစ်ခုကို Free ပေးလိုက်တာပါ အခု Free ပေးတဲ့ Version မှာတော့ Online Lab တွေနဲ့ Exam Voucher Code ပါမှာမဟုတ်ပါဘူး .. Online …
£500 (မြန်မာငွေ 8 သိန်းနီးပါး) တန် Network Security Course တစ်ခုကို Free ရအောင်ယူနည်း Read More »
အသုံးပြုသူတွေအပေါ်လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းနေတဲ့ App တခုကို AppStore ပေါ်မှဖယ်ရှားခဲ့တဲ့ Apple
Apple, Cyber Security, News / By Pyae Heinn Kyaw
အသုံးပြုသူတွေအပေါ်လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းနေတဲ့ App တခုကို AppStore ပေါ်မှဖယ်ရှားခဲ့တဲ့ Apple Read More »
စတိုးဆိုင်တခုရဲ့ လမ်းမဖက်ကိုပြသထားတဲ့ Display ကို Hack ပြီး Porn တွေပြသသွားဖြစ်ရပ်
UNICODE ONLY နယူးဇီလန်နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးအားကစားပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်ဖြစ်တဲ့ Asics Store ဟာ သူတို့ရဲ့ကြော်ငြာ video တွေကို 24 hours ပြသနိုင်ဖို့လမ်းမဖက်ကိုလှည့်ထားတဲ့ Display အကြီးကြီးတွေထားထားပါတယ် .. ပြီးခဲ့တဲ့ Sunday မှာတော့အဆိုပါ Display တွေကို အမည်မသိ hacker တွေက hack သွားပြီး Porn video တွေပြသခဲ့တာပါ .. hack ပြီး video တွေပြသသွားခဲ့တာကတော့ ည 1 နာရီကတည်းကဖြစ်ပြီး မနက် 10 နာရီ ဝန်ထမ်းတွေရောက်လာမှ ပိတ်လိုက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ် .. ဒီဖြစ်ရပ်အတွက် Asics Store ရဲ့ manager ကရော store ရဲ့ တရားဝင် twitter ကနေပါ တောင်းပန်သွားခဲ့ပါတယ် …
စတိုးဆိုင်တခုရဲ့ လမ်းမဖက်ကိုပြသထားတဲ့ Display ကို Hack ပြီး Porn တွေပြသသွားဖြစ်ရပ် Read More »
Facebook ကနေကိုယ့်မျက်နှာ data တွေရယူနေတာကိုဘယ်လိုပိတ်မလဲ?
Cyber Security, Knowledge / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE ONLY Facebook ရဲ့ Face recognition setting ဆိုတာ သင့်မျက်နှာကိုမှတ်သားထားပြီး သင့် friend တွေက ပုံတင်တဲ့အခါ သင့်မျက်နှာပုံ ပါမပါကိုရှာပေးပြီး auto tag လုပ်ပေးတဲ့ နည်းပညာတစ်ခုပါ. ဒီတော့ကိုယ့်မျက်နှာပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို Facebook ကိုမပေးချင်ရင် အောက်ပါနည်းအတိုင်းပိတ်ထားလိုက်လို့ရပါတယ် .. Step 1 – Settings and Privacy အောက်က Privacy Shortcuts ထဲသွားပါ Step2– Control face recognition ကိုနှိပ်ပါ Step3– ဒီနေရာမှာ No ဖြစ်နေပြီးသားလူတွေကဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူး .. Yes ဖြစ်နေတဲ့လူတွေက No ပြောင်းပေးလိုက်ပါ ဒါဆိုပြီးပါပြီ .. …
Facebook ကနေကိုယ့်မျက်နှာ data တွေရယူနေတာကိုဘယ်လိုပိတ်မလဲ? Read More »